Te handresy amin'ny lalao rehetra ataonao ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra izay hamaha ny olanao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe X8 Sandbox. Izy io no mpiambina lalao Xposed faka-tena farany, izay manome fanaraha-maso mora foana amin'ny tombontsoanao faka. Manome fitaovana isan-karazany izy io, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpampiasa dia afaka mamaky mora foana ny lalao rehetra.
Araka ny fantatrao dia malaza be ny hacking amin'izao fotoana izao, saingy sarotra ny mahita ny fampiasana fitaovana tsara. Misy hacks isan-karazany azo alaina eny an-tsena, izay ahafahan'ny mpampiasa miditra mora amin'ny endri-javatra. Saingy ny fampiasana azy ireo dia tsy miasa tsara ho an'ny mpampiasa.
Matetika ireo mpijirika dia tsy maintsy mamaka ny fitaovany, izay manapaka ny fiarovana rehetra amin'ny fitaovany ihany koa. Amin'ny lafiny iray, amin'ny alàlan'io hack io dia afaka mandresy lalao mora foana izy ireo. Saingy tsy azo antoka intsony hampiasana azy ireo ny fitaovan'izy ireo. Noho izany, misy olana samihafa amin'ireo hacks ireo, izay tsy maintsy ampiasain'ny mpampiasa aorian'ny faka.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny rindrambaiko farany, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo mora foana ny endri-javatra an-taonina tsy misy faka. Fantatrao ho fantatrao daholo ny momba an'io? Raha eny dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy fotsiny ary hizaha izany rehetra izany. Raha manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Topimaso momba ny X8 Sandbox App
Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra ny manome endri-javatra faka sy serivisy hafa tsy miorim-paka amin'ny fitaovana Android. Manolotra fitaovana samihafa ihany koa izy io, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpampiasa dia afaka mamaky mora foana ny lalao Android rehetra ary milalao soa aman-tsara. Maimaimpoana ny serivisy rehetra misy amin'ity rindranasa ity, izay midika fa tsy mila mandoa vola.
Noho izany, ny hack voalohany, izay azonao ampiasaina mora foana amin'ny lalao rehetra amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity dia ny hafainganana. Manolotra ny mpampiasa haingana sy hampiadana ny fotoana izy io, amin'izay ahafahanao manao sarimihetsika marobe ao anatin'ny iray segondra ary koa manaova fanafihana avy amin'ny mpanohitra. Azonao atao ihany koa ny mamita iraka lava be avy hatrany sy mora.
Raha te hanongotra ianao dia manolotra ireo mpampiasa handalo dingana tsotra. Mila manaraka ny toro-lalana misy fotsiny ianao ary afaka mamadika ny fitaovana Android ho faka tsy misy karazana fametrahana rindrambaiko mafy. Azonao atao koa ny manova ny tombotsoan'ny root amin'ny fotoana rehetra.
Ny fizotry ny fipihana dia iray amin'ireo zavatra be mpampiasa indrindra amin'ny fitaovana Android, indrindra rehefa milalao lalao. Noho izany dia manolotra paompy mandeha ho azy izy io, izay manolotra tap ho azy amin'ny toe-javatra samihafa, izay tsy mila manindry imbetsaka ianao.
Misy ihany koa ny hacks hafa misy, izay ahafahanao mandresy lalao mora foana. Izy io koa dia manome ny sary amin'ny sary an-tsary, izay ahafahanao mandrindra efijery roa miaraka. Afaka milalao lalao ianao eo am-pijerena horonantsary na zavatra hafa. Misy endri-javatra mahavariana kokoa taonina, izay azonao jerena mora foana ao.
Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao dia araho fotsiny ireo dingana. Ny app, izay tianao ho hack dia tokony ampiana ao aminy. Azonao atao ny manokatra tsotra izao ity rindranasa ity izay manome ny fampiharana hafa rehetra izay eo amin'ny fitaovan'ny Android anao.
Mila misafidy ilay fampiharana manokana ianao, izay tianao hanandramana ireo endri-javatra ireo. Vantany vao ampiana ny app dia alefaso fotsiny ilay app. Hanome kisary mitsingevana eo amin'ny fampisehoana izy io, amin'izay ahafahanao manova ny fanovana ilaina amin'ny lalao mora foana.
Noho izany, ity dia topy maso kely momba azy io, saingy mbola misy maro hafa. Noho izany, sintomy fotsiny ny X8 Sandbox ho an'ny fitaovana android ary manomboka milalao lalao ary mandresy amin'ny lalao rehetra. Raha te hizara aminay ny zavatra niainanao ianao dia ampiasao ny fizarana hevitra etsy ambany ary ampahafantaro anay ny hevitrao.
anarana X8 Sandbox
Anaran'ny fonosana com.x8zs.sandbox
Fampiharana hacking tsara indrindra
Fehezo ny fampiasa Root
Hafainganana sy paompy Hacks
Sary amin'ny sary asongadin'ny sary
Easy Control amin'ny endri-javatra rehetra
Mifanaraka amin'ny rindranasa filokana samihafa
Sarotiny amin'ny Internet ireto karazana fampiharana ireto, saingy eto ho anao rehetra izahay. Noho izany, hizara azy aminareo rehetra izahay, izay azonao sintonina sy apetrakao mora foana amin'ny fitaovanao Android. Misy bokotra fisintomana roa misy eto amin'ity pejy ity, manamboatra paompy tokana fotsiny amin'izy ireo. Hanomboka ho azy ny fisintomana, aorian'ny paompy.
X8 Sandbox Apk no fampiharana tsara indrindra amin'ny gamer rehetra. Afaka mahazo tanana ambony mora foana ianao amin'ny lalao an-tserasera na an-tserasera. Noho izany, ampiasao maimaim-poana ireo fiasa tsara indrindra amin'ity fampiharana ity Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Tools Tags X8 Sandbox, X8 Sandbox Apk Post Fikarohana